ဝတ္ထု Archives - MYATMINGALAR
ဇော်ဂျီတပသီတို့ ပျော်ပါးရာအရပ် ဟိမဝန္တာတောမှာ “သူယောင်” လို့ခေါ်တဲ့ နွယ်ပင်ကြီး တစ်မျိုးရှိသတဲ့။ အဲဒီ “သူယောင်” နွယ်ပင်ကြီးမှာ လူမိန်းမနဲ့သဏ္ဌာန်တူတဲ့ အသီးတွေရှိသတဲ့ သူယောင်သီးဟာ အလွန် လှတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအလွန်လှတဲ့ သူယောင်သီးတွေကို လူမိန်းကလေးလို လှည့်ဖြားပြီး ပြုစားတတ်ကြလို့ လှလည်းလှ လှည့်စားတတ်တဲ့ အရာအားလုံးကိုလည်း “သူယောင်မယ်” လို့ တင်စားခေါ် ဆိုတတ်ကြတယ်။ မြန်မာအဘိဓာန် အတွဲ၄၊ Continue Reading
အဝေးမှ ရထားတစ်စင်းသံကို ကြားရသည်။ သဲ့သဲ့ကြားရာမှ ကျယ်လာသည်။ “တူ-တူ-တူ”ဟူသော ဥသြသံနှင့်အတူ ဘီးတလိမ့်လိမ့်သံပါလာသည်။ နီးလာသည်။ ဥသြသံရှည်သည်။ ည၏ တိတ်ဆိတ်မူကို လှုပ်ခတ်သွားစေသည်။ လေတစ်ချက်တိုက်သည်။ ဓနိမိုးပေါ် ပြေးတက်သွားပြီး အမိုးရွက်များနှင့် တဖြတ်ဖြတ် မြည်အောင် ဆော့ကစားပြီးမှ ထွက်ပြေးသွားသည်။ မီးခွက်ထိပ်ဖျားမှ မီးညွန့်ဝါဝါလေး ယိမ်းလှုပ်သွားပြီး ပြန်တည်ငြိမ်သွားသည်။ ရထားဘီးသံသည် ညထဲပြန်အိပ် သွားပြန်သည်။ ခွေးတစ်ကောင်အဝေးမှ ဟောင်သည်။ Continue Reading
“ဟယ် . . .ဒွေးမေလာပြီ . . . ဒွေးမေလာပြီ” ခြံဝတွင် အထပ်တစ်ပွေ့ တစ်ပို်င်နှင့် ဒွေးမေကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ဝမ်းသာစိတ်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ အော်လိုက်မိသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ သတိမထားမိခင် အပြေးဆင်းနေမိသည်။ “ဟဲ့ . . . ဟဲ့ . . . လုံမရဲ့၊ မပြေးနဲ့၊ မပြေးနဲ့ Continue Reading
အခန်း (၁) ကွန်တော် အခုတလော ကြားကြားနေရတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်။ မိန်းကလေး အတော်များများရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာစွဲနေတဲ့ သီချင်း။ ဘာတဲ့ “ကိုယ်ရည်းစားဘေးနားမှာ တစ်ယောက်လုံးရှိတာတောင် ရှင်ကတော့ တခြားမိန်းကလေးတွေငေးကာ” တဲ့။ အဲဒီသီချင်းလေးကို ပြန်စဉ်းစားပြီး ကွန်တော့်ရဲ့ အဖြစ်ကို စဉ်းစားမိကာ ပြုံးမိသည်။ ကွန်တော်ချစ်မိသည့် ကောင်းမလေးက ကွန်တော့်ထက် (၅)နှစ် လောက်ငယ်သည်။ ကွန်တော်ကသာ ကောင်မလေးအပေါ် အရူးအမူး Continue Reading
(၁) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှင့်တင်ရေသင်တန်းတစ်ခုတွင် သူနှင့်မွန်း စတင်သိကွမ်းခဲ့ရသည်။ သင်တန်းစတင်ပြီး ဒုတိယမြောက်နေ့တွင်ပေါ့ . . . (၂) “ကွန်တော်ဒီမှာထိုင်မယ်နော်” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ မွန်း၏ ညာဘက်ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သော သူ့ကို ငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ရှပ်လက်ရှည်နို့စိမ်းရောင် ဖျော့ဖျော့နှင့် ကချင်ပုဆိုးကို ဝတ်ဆင်ထားသော အသားခပ်ညိုညိုနှင့်ထိုသူကို ကြည့်ကောင်းသောသူတစ်ယောက်အဖြစ်စိတ်ထဲမှ ချီးမွမ်းလိုက်မိသည်။ ကွန်တော့်နာမည် ဂွတ် ပါ . . ဒီမနက်မှတောင်းကြီးကရောက်တာလေ” Continue Reading